Mazano Makuru Kubva Kuzivikanwa Kwemazuva Ekuwongororwa Kwemawebhusayithi
Nhasi mawebsite akawanda ane toni yedata, uye vanotsvaga webhu vanoda kuziva zvimwe zvinhu kuti uone kuti ungapedzisa sei kupora zvakanaka. Mabhizinesi mazhinji anoshandisa web scraping kuwana mabhanga makuru e data yakakodzera. Kunyange zvazvo mapeji ewebhu akawanda ane zvigadziriro zvekuchengetedza, dzimwe nyanzvi dzinopa zvimwe zvishandiso zvikuru kune vashandisi - handl case iphone 7 plus. Izvi zvinotevera mazano makuru ekutsvaga webhu vanoda kutsvaga data kubva kune mawebhusayithi akasiyana-siyana uye nokukurumidza. Chinhu chinonyanya kukosha kune web scrapers ndechokuti uwane zvishandiso zvakakwana kuti utange kupora mawebhusayithi. Somuenzaniso, vanogona kutanga nekushandisa online web scraper iyo inogona kuvabatsira kuita basa. Ichokwadi, pane dzakawanda zvekushandisa zvekushandisa kwebasa iri. Kana vachirapa mawebhusayithi, vanofanirwa kuchengetedza nhamba dzose dzedambudziko dzavakadanirwa. Somugumisiro, vanogona kuchengetedza munzvimbo imwe dzakasiyana-siyana dze URL dze mapeji akambaira. Somuenzaniso, web scrapers inoda kuvaka matafura akasiyana-siyana mubhuku ravo rekuchengetedza kuchengetedza magwaro akakopiwa..Kunyanya zvakanyanya, web scrapers vanoita mafaira akaparadzana kuchengetedza dhese yavo yose pamakombiyuta avo, kuti vavatsanangurire gare gare.
Ita spider kuti iparure Multiple Websites
Chigunha chirongwa chekunyora chinoshamisa chinotenderera mumapeji akasiyana-siyana ewebhu kuti uwane ruzivo rwakakodzera. Inogona kuwana ruzivo rwakawanda runochengetwa pamapeji akasiyana-siyana paIndaneti. Nokuvaka nekuchengetedza girapiti (kana bot), zvinoreva kuti vanogona kutyora web kuburikidza zvakasiyana. Indaneti inzvimbo huru, kwavasingafaniri kuishandisa kungoverenga zvinyorwa uye kuwana ruzivo rwakanyanya pamusoro pehuwandu hwemashoko ehupfumi kana kushanyira e-mabhizimisi. Asi vanogona kuzvishandisa ivo pachavo. Iyi nzvimbo huru, kwavanogona kushandisa mapurogiramu akasiyana-siyana kuita zvinhu zvichavabatsira kufambira mberi nekusimudzira kushanda kwebhizimisi ravo.
Kutaura zvazviri, mugandanyama unogona kuverenga mapeji uye kubvisa uye kukopa deta. Somugumisiro, vekutsvaga webhutori vanogona kushandisa nzira dzose dzakapiwa dzinogona kukanganisa kufamba kwekukambaira kamwe chete. Vanongoda kugadzirisa tsananguro kune imwe nguva inomhanya. Semuenzaniso, vanogona kugadzira gurusi rinopinda mune dzimwe nzvimbo uye kuita chimwe chinhu sevanowanzoshandisa vashandisi. Uyezve, mugandanyama anogona kuwana dhidhiyo achishandisa APIs saka saka inogona kuita mabasa akasiyana-siyana paunopinda kune dzimwe nzvimbo. Tsvakurudzo dzewebhu dzinoda kungoyeuka kuti spider spraping yavo inofanira kuchinja mararamiro ayo apo ichikwaira kune mawebsite akasiyana-siyana.